Wiri-mukadzi wakasungwa newiricheya akabatwa achibvira mumoto wemba | Karman® Mawiricheya
Mahofisi akasvika panzvimbo yemoto weCalifornia City moto, uko kwavakaudzwa nezvazvo wiricheya-akasungwa munhu akabatwa mukati mechivako.
Mukati meimba, maive nemuvakidzani wepedyo uyo aiziva nezvemunhu akavharirwa mukati; mupurisa nemuvakidzani vakabatana pamwe chete kusunungura mukadzi uyu kubva mumatope ake.
Mupurisa nemuvakidzani vakagadzirisa mamiriro ezvinhu ndokununura mukadzi uyu upenyu kubva kumagumo anosiririsa, vanhu vanoziva chiitiko ichi vakacherekedza kuti mukadzi anga asingazive kuti pane moto mumba make kusvika nguva yapera.
Mukomana fundraises yekutenga wheelchair yeshamwari yake yepamwoyo Casious the pooch.